Shiinaha Wooden super bass USB bluetooth 2.0CH dhawaaq maqal ah oo maqal ah Hi-Fi hifi buugaagta lagu qoro (BT-106) Soo-saar iyo Warshad | Eyin
Wooden super bass USB bluetooth 2.0CH codka dhawaaqa maqalka ee Hi-Fi hifi hishe (BT-106)
Qaybta Darawalka: 4 ″ x2 + 1 ″ x2
Awoodda wax soo saarka: 60W
Jawaabta Joogtada ah: 60Hz ~ 20KHz
Cabbirka Badeecada: W160xD220xH275MM
Waxqabadka: Bluetooth / AUX IN / Aragti / AUX OUT / USB
• 1XAUX INPUT - Isku xirnaanta ku habboon qalab kasta oo leh soo saar sameecad madaxeed oo dhan 3.5mm ama soo saar RCA ah.
• Nooca Bluetooth- Waa fududahay in qalabka lagu xiro iyada oo loo marayo Bluetooth si loogu raaxeysto muusikada fiican.
• Muusigga Soo-galinta-Muusiga ee USB-ga.
• SHAQADA CODSIGA STUDIO - Soo saarida codka dabiiciga ah laga bilaabo 13mm xome xome xome iyo cutubka 4 inji oo buuxa.
• WOOD FILISH CLASSIC - Dhisme alwaax ah oo tayo sare leh oo loo yaqaan 'MDF alwaax' oo lagu dhammaystiray saamaynta alwaaxda vinyl wuxuu u noqdaa ammaan weyn qurxinta guriga.
Waxqabadka lagu kalsoonaan karo
BT-106 kuhadlayaasha sheybaarada buugta ku shaqeeya waxay isku darsadeen muuqaal gadaal ah iyo dareen casri ah oo tayo maqal ah. Haddii aad raadineysid kuwa ku hadla buugaagta shebekadaha la awoodi karo oo aad u kala jaban oo leh dhawaq aan tanaasul lahayn BT-106 buugaagta buugaagta ku hadla ayaa ah nidaamkaaga hadalka u socda-ilaa 2.0. Waxay ka kooban tahay darawal baska 4-inji ah iyo deked leysku habeeyay oo la shiday, flared bass flalex, nidaamkan ku hadlaya buug-gacmeedka wuxuu soo bandhigayaa qoraallo baasi ah oo hodan ah oo ka buuxa joogitaan iyo qoto dheer. Wax soo saarka aaminka ah ee waxqabadka iyo waxqabadka BT-106 waa riyo kasta oo la maqlo. Inta badan macaamiisha Edifier-ku waxay adeegsadaan BT-106 ku shaqeeya kuxidhka buugaagta lagu qoro shebekadaha si ay ugu xiraan aaladaha loo rogo waayo-aragnimada maqalka ugu wanaagsan Ku raaxayso vinyl-kaaga caadiga ah adoo ku raaxeysanaya horumarka ku jira teknolojiyadda maqalka ee casriga ah.
Xakamaynta saxda ah
Shakhsiyan shakhsi ahaan khibradaada dhageysiga basaska, seddexleyda iyo mugga garaac sameecadaha kuhadla buugaagta daabacan. Codka tayada leh ee la soo saaray ayaa ah kuwan ku hadla buugaagta buugaagta ee loo yaqaan 'bookshelf' waxay soo gudbinayaan dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo soo jiidanaaya dib u eegaha. Qalab istiraatiijiyad kooban oo wax ku ool ah ayaa lagu soo daray. Waad hagaajin kartaa mugga oo waxaad dejin kartaa kuwa ku hadla si ay u aamusnaadaan markii loo baahdo adigoon la xiriirin kuwa ku hadla; awood iyo kaamil ahaanta farahaaga. Edifier R1280T wuxuu la yimaadaa xakamaynta codka ee dhinaca afhayeenka firfircoon. Waxay kuxirantahay doorbidka, waxaad ku sameyn kartaa dib u habeyn yar oo seddex jeer ah iyo basas laga bilaabo -6 illaa +6 db. Xakamaynta mugga dhijitaalka ah ayaa si otomaatig ah loogu dejiyaa heer raaxo leh markasta oo kuwa ku hadla ay ku shaqeeyaan.
Gal Labaad RCA ah
BT-106 ku shaqeeya sheyada sheyga ayaa kuu oggolaaneysa inaad ku xirnaato aalado badan oo maqal ah adoo adeegsanaya labada waxyaabood ee RCA. Markaad eegto qaybta dambe waxaad si fudud ugu garan kartaa mid ka mid ah ku hadlaanka hadalka iyo midna waa ku hadla firfircoon. Hadalka firfircoon wuxuu leeyahay laba gasho oo ku yaal dhabarka. Wax-soo-saarkaan ayaa ku habboon RCA illaa RCA ama RCA illaa isku xirnaanta AUX. Ku xir iyaga PC, laptop, kiniin, taleefan ama rikoor ciyaariyahan. Ku hadlayaasha ayaa isku xira midba midka kale iyada oo loo marayo silig afhayeenka caadiga ah. Noocyada kala duwan ee fiilooyinka ayaa ka mid ah waxay hubineysaa in macmiilkeennu uu ku raaxeysto muusikadooda aaladaha badankood isla sanduuqa.
Hore: Tayada sare MAXX BASS shaashadda shaashadda shaashadda oo leh 2.4G subwoofer wireless (SP-602 leh subwoofer)
Xiga: Tayada Sare ee PC 2.0 USB Ciyaaraha TV-ga ee Ciyaaraha, Soundbar Bluetooth Gudoomiyaha (SP-600B)
Bluetooth Soundbar Fiilo leh iyo Xarig la aan
Mini Wireless Bluetooth Gudoomiyaha
Gudoomiyaha Bluetooth wireless
Warshadda Qiimaha Midabada RGB Hadalka Bluetooth W ...
Naqshadeynta Qaaska ah ee loo yaqaan '2020 Unique design Multi-function sound soundbar ...
Portable USB mini Fiilooyin 2PCS desktop / laptop s ...
Warshad Qiimaha Jaban 2.0 Cabbirka Yar ee Kombiyuutarka Spe ...
ODM soosaarka hifi ku hadla alwaax dadban Hom ...
Gudoomiyaha Alwaaxda Dahaaran ee Alwaaxda Guriga Th ...
Wifi Soundbar Wixii Tv, Karaoke Soundbar, Hadalka Wifi Soundbar, Tv Iyo Soundbar Mount, Alexa Soundbar, Tv Soundbars,